Nwatakịrị a tọọrọ ka ọ na-edugharị ndị isi na-ariọ aririọ - BBC News Ìgbò
Nwatakịrị a tọọrọ ka ọ na-edugharị ndị isi na-ariọ aririọ
Samuel Abdulraheem dị afọ asaa mgbe a tọọrọ ya, mana onweghi ihe o nwereike icheta banyere ụbọchi a tọọrọ ya n'ụlọ ha dị n'obodo Kano nke Naịjirịa.
Nna Samuel lụrụ ụmụnwanyị anọ ma mụtakwa ụmụ iri na asaa.
O furu afọ isii tupu a hụ Samuel anya ọzọ site na mgbe ọ nọ na-anya inyịnya igwe ya a tọọrọ ya.
Dịka nwanne ya nwaanyị aha ya bụ Firdausi Okezie na echeta sị, "anyị mere ihe niile anyị nwereike ime ịhụ na a chọtara ya".
Firdausi ka bụ nwaagbọghọ dị afọ iri abụọ na otu mgbe a tọọrọ Samuel. O chetara mgbe o si ụlọakwụkwọ mahadum lọta, a gwa ya na nwanne ya nwoke bụzị onye a na-achọ achọ.
Image copyright EZINAỤlỌABDULRAHEEM
Nkenke aha onyonyo Na mbụ emeghi ka nne Samuel bụ onye nọ na Foto a mara na nwa ya na-efu efu
O chetara mbọ ha gbara n'ịchọ nwanne ya. O chetakwara na ha kpọchiri onye na-elekọta Samuel, chọọ ya gburu gburu niile ma tinyekwa foto ya n'akwụkwọ mgbasa ozi.
Ha gakwara na nke ndị alakụba na-ahụ na mmụọ, mana ihe ndị a niile bụ n'efu.
Ezinaụlọ a mechara kwere na Samuel bụ ọnye lara ala.
Olileanya na ihe ebube
Firdausi nwere olileanya, nwaada a mechakwara were ofufu nwanne ya nwoke dee ihe edemede ule Mahadum.
Firdausi mechara bụrụ ọnye nke Kraịst, bido na-efe Chineke n'ụlọụka Winners Chapel nke dị n'Ogun Steeti.
Kwa ọnwa Disemba ọbụla, ndị ụlọụka a na-enwe ọgbakọ ha na-akpọ "Shiloh" nke ndị mmadụ na-esi ebe dị iche iche abịa.
Ọ bụ n'ọgbakọ "Shiloh" nke afọ 2000 ka Firdausi gara ire ahịa ma kpee kwara Chineke ka ọ nọ wee hụ otu onye isi nwantakịrị na-edu, o wee tipu mkpu mgbe ọ hụrụ na nwantakịrị du onye isi ahụ bụ nwanne ya nwoke furu efu; Samuel.
Etu esi tọrọ Samuel
Samuel etoola ugbua bụrụ nwoke dị afọ iri atọ.
O kwuru na onweghi ike icheta otu e si tọọrọ ya. Naanị ihe onwere ike icheta bu na etinyere ya na ụgbọ oloko kpọgara ya otu nwanyi nwere nani otu aka nke bi na Lagos.
Uwa Onye Ohu
Nwanyi a na akpọpụ ya kwa ụbọchi, kpọgara ya ndi na ariọ arirịọ.
Ha bu ndi aririọ na akwu nwanyi a hu Naira nari ise kwa ụbọchi ọ bụla samuel du ha kaharia irio aririọ.
Naanị ya na nwaanyị a bị , mana ka afọ na aga, e nwekwara ụmụaka ise bịakwara binyere ụmụnwaanyị ndị ọzọ bụ agbata obi nwaanyị otu aka ahụ.
Samuel kọwa kwara na ọ dịka enwere ihe emere ya n'ihi na onweghi ihe o chetara tinye kwara na ọdịghị mgbe o chetara ụmụnne ya ma ọ bụ nne na nna ya.
"Uche m lara ala, naanị ihe m maara bụ duru ndị arịrịo gagharịa, rịọta ego, rie nri , hie ụra ma malite kwa otu a kwa ụbọchi." Samuel.
Ọ na-ekwu na uche ndị arirịọ a na a dị ya mgbe ọbụla. Na dịka nwantakịrị, ike nwere ike ịgwụ ya ma mee ka ọ gafee ebe ndị mmadụ nọ mana ndị isi a nwere ntị ruru ala, ha na akpohachị ya sị ya na ya lahachi azụ na onwere ndị ha gafere.
Samuel kwuru si " echeghị m na ndị aririọ a dị njọ. Ọru ha agwụla naanị ibilite n'ụtụtụ bido riọ wa arịrịọ otu ndị mmadụ si ebido ejikere ị ga ọru"
Ihe Ọlụ ebube
Na ọnwa Disemba ka otu ọnye isi Samuel na eduharị, nụrụ na ndị ụlọ ụka Winners chapel na eme ọgbakọ, wee kpọrọ ya gawa. Ebe a ka nkwenkwe nọ kwee ha were zute nwanne ya nwanyi.
Akpata oyi wụrụ Firdausi mgbe ọ hụrụ nwanne ya nwoke, ọ nweghi ọnụ okwu.
" e tiri m mkpu daa n'ala" Firdausa na-ekwu
Ndi ọgbakọ gbatara ya ọsọ enyem aka jụwa ya si "ọ bu gini" .
Firdausa jisiri ike gwa ha na ihea bụ nwanne ya nwoke furu efu kemgbe afọ isii.
" a matara'm na mụna ya metutara mana amaghi'm otu mu na ya si metụta" samuel.
Ndi ọgbakọ Shiloh gbaliri sapu samuel ahu, yiwe ya ezigbo uwe ma kpọputa ha n'iru ụlo ụka ka ha kwuo ihe iribaama mere ha.
ọnye isi Ulọ ụka Winners Chapel kpọtara Samuel ma kpere ya ekpere.
Ọ dị Firdausi ka legọs ọ bụzi Lọndọn, obi bụ ya sọ aṅụrị.
Oge Samuel gbakere
Firdausi na-ekwu na ihe na ewute ya bu na obi ụtọ ichọta nwanne ya mere ya ka ochefuo umuaka ndi ọzọ nọ n'aka umu nwanyi ndi ahu di ka ohu.
Samuel kwuru na otebeghi anya nwanne ya zọputara ya, ka akpọtara otu nwa ntakiri ka o soro ha ma na nwatakiri ahu bewere akwa ma jukwa iri nri. O kwuru na nwatakiri a mechara nọrọ nwanyọ, samuel kwenyere na onwe ihe enyere nwata kiri a ka ọ mechie onu.
Nkenke aha onyonyo Samuel na nwanne ya nwaanyị n'ụbọchị agbamaakwụkwọ ya, ihe dịka afọ abụọ ọ chọtachara ya
'ọ buru na ala nwere ezigbo ọchichi, ọnye udiri ihe a mere kwesiri i ga-kwuru ndi uweojii ka ha rụọ ọrụ ha , kama na Naijirịa, ha ka a si ka i weta ego mmiri mụọ maka ụgbọ ala ha ma ọ bụ ego maka ihe ọzọ" Firdausi.
Otito na ihe ndị ọzọ wukasiri samuel na ahu. A chọpụta kwara na elu aka ya lara ala site na aka ndi isi ahu na ebigide ya kwa ubochi.
Nne ya ekwetaghi na ihea bu nwa ya mgbe ọ hụrụ ya n'ihi na ahụ afọzighi ya mgbe ọ hụrụ ya. ọ welitere aka ya elu were hụta ebumpụtaụwa di n'ahụ ya tupu ọ were kwete.
Mgbe Samuel ghọrọ nwaakwụkwọ
O siri ike ichọta ụlọ akwukwo ka anabata samuel n'ihi na ọ oruola afọ isii ọ gasọro akwukwọ.
ọ bu otu nwanyi hụrụ ha mgbe ha putara na ọgbakọ Winners chapel kwetere nabata samuel n'ụlọ akwụkwo ya.
Firdausi chọtara samuel ndi nkuzi ọzọ.
Na n'ime ọnwa atọ, samuel sitere na prịmarị one banye prịmarị 4. N'ime otu afọ, ọ lere ule "common entrance" ma mee nke ọma banye sekondiri.
Nkenke aha onyonyo Samuel Abdulraheem mere nke ọma n'agụmaakwụkwọ ya
Samuel guru Sekondiịrị afọ atọ were lee ule ibanye mahadum ma meekwa nke ọma were banye "Ahmadu Bello University, Zaria" .
Isi na anụ Samuel ọkụ, nke mere umu akwụkwọ ibe ya na a bia kwute ya ka ọnyere ha aka ma kuzie kwara ha ihe.
Kama samuel metere onwe ya ihe ọjuo mgbe a jidere ya n'ule ebe ọ na edere nwata akwukwo ọzọ ihe n' ule. Nkea mere ka achụọ ya na mahadum.
'Iwe adịghị m n'obi'
"M kpata tu ego, a ga m alaghachi ụlọ akwụkwọ mahadum, ka m gụọ kọmputa sayensi" ka samuel kwuru.
Ugbua samuel na e bi ndụ ya na enweghị ilu n'obi ya maka na o kwetere na ihe mere ya na nwata bu ihe e ji kuziere ya ihe ga e me ya ka ọ buru ọnye hụrụ ndi madu n'anya.
"O nweghi ihe mmadụ ga-eme ga ewutem, a na m ahụ zi ya dịka etu ụwa di. Anaghị m ebu ihe ọjọọ n'obi."
Nkea meziri ugbua, ọ hu ndi arirịọ, ọ na-ghi enye ha ego kama ọ na enye ha ihe oriri. ọ na akọwa na " i nye ndị aririo nri, nri ahu ga erute nwatakiri du ha mana inye ha ego, ego ahu ga alara nani ọnye aririo ahu" .
Samuel bu n'obi na akụkọ ihe ọ gabigara na nwata ga ekuziri ndi mmadu na ụfọdi ụmụ aka na-edu ndi isi na arịọ ari rịo nwere ike i bu ụmụ aka no na ihe nkpa di ukwu ; " ihụ nwatakiri du ọnye isi ario arirịọ,enyela ha ego ma gawa, biko lezie anya n'ihi na nwatakiri ahu nwere ike i bu onye i ga enyere aka" Samuel.
Abia steeti ka mma ugbua karia mgbe m banyere n'ọchịchị - Ikpeazu
Ọkaikpe ga-ekpe Nnamdi Kanu ikpe abịaghị ụlọikpe taa
Ndị amaghị ndị ha bụ kpochiri ọdọahịa ụmụ Najiria na Ghana